Okufanele Ukwenze Lapho i-Outlook PST /OST Ifayela lihamba kancane noma aliphenduli - Ibhulogi Lokubuyiselwa Kwemininingwane
Ikhaya Ukubuyiswa kwedatha Ukubuyiselwa Kwefayela Ukubuyiselwa Kwe-imeyili Ukubuyiselwa Kwedatha ye-Outlook Okufanele Ukwenze Lapho i-Outlook PST /OST Ifayela lihamba kancane noma aliphenduli
Ukubuyiselwa Kwedatha ye-Outlook January 18, 2021
Ezinsukwini zanamuhla post, sizohlola izizathu ezivamile zokuthi kungani iPST noma OST amafayela angahle ahambe kancane noma angaphenduli futhi anikele ngezindlela ezahlukahlukene zokulungisa le nkinga.
Uma ubona ukuthi isoftware yakho ye-imeyili yeklayenti ithatha isikhathi eside ukulayisha idatha yebhokisi leposi, udinga ukuphenya izimbangela bese uyilungisa. Lokhu kungenxa yokuthi lezi zimpawu zingakhombisa inkinga enkulu nge-software yakho ye-MS Outlook.
Yini eyenza i-PST /OST amafayela ukuhamba kancane noma ukungaphenduli?
Kunezizathu eziningana ezingaphazamisa ukusebenza kwe-Outlook. Isibonelo, yonke inguqulo ye-Outlook inezidingo eziyisisekelo zohlelo okumele zihlangatshezwe ukuze isebenze kahle. Izidingo zesistimu zifaka isivinini seprosesa, inkumbulo, isikhala sediski enzima, uhlelo lokusebenza, nekhadi lemidwebo.
Uma ikhompyutha yakho ingahlangabezani nazo zonke lezi zidingo ezisethiwe, amafayela e-imeyili e-Outlook angangasabeli noma ahambe kancane. Isibonelo, uma kuphela ingxenye yezidingo ezifana nesikhala sediski nememori ihlangatshezwa, kepha uhlelo lokusebenza luphansi kunalokho okudingekayo, uhlelo lokusebenza lungafakwa kepha luqhubeke nokushayeka njalo lapho uzama ukulivula.
Ngakolunye uhlangothi, uma isistimu yakho ihlangabezana nezimfuneko ezibekiwe zesoftware ye-Outlook ezosebenza, ngesikhathi iPST noma OST ifayela lingakhula kancane kancane futhi lifinyelele kumkhawulo wosayizi obekiwe. Uma lokhu kwenzeka, kuba nzima ukufinyelela kudatha yakho yebhokisi leposi. Izengezo ezivela eceleni zingakusiza ukuthi uthuthukise ukusebenza kahle ekuphatheni idatha yebhokisi leposi ngenkathi ukuphakelwa kwe-RSS kukusiza ukuthi ugcine amathebhu ezindabeni zamanje. Kodwa-ke, uma uvumela ama-add-ins ngokweqile nokuphakelwa kwe-RSS, i-Outlook ingahle yehle noma yehluleke ukuvula.
Ngaphezu kwalokho, uma i-Outlook ingavali kahle, amaphutha angavela kufayela le- OST noma ifayela le-PST futhi i-PST eyonakele or OST idatha. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuhlaselwa yigciwane, ukuvalwa okuphoqelelwe lapho i-Outlook isasebenza, kanye nesoftware yomuntu wesithathu efana nama-add-ins asebenza kuhlelo lwe-imeyili. Ubukhulu bomonakalo ku-PST /OST ifayela lizonquma ukuthi uzokwazi yini ukufinyelela kwimininingwane yakho yebhokisi leposi.
Ungayixazulula kanjani inkinga ye-PST ehamba kancane noma engaphenduliOST ifayela
Lapho ubhekene ne-PST / engasheshi noma engaphenduliOST file, kunconywa ukuthi wenze uphenyo olunzulu ukuthola imbangela yenkinga. Start ngokuhlola noma yiziphi izinguquko okungenzeka uzenzile ezinhlelweni zokusebenza muva nje.
Uma usanda kufaka i-Outlook, hlola ukuthi ngabe ikhompyutha yakho ihlangabezana nezidingo zohlelo ezidingekayo ukuze uhlelo lusebenze kahle. Uma kungenjalo, thuthukisa isistimu yakho noma ufake inguqulo ye-Outlook evumelana nemininingwane yekhompyutha yakho. Njengoba wenza kanjalo, qiniseka ukuthi ukhetha inguqulo yamanje ye-Outlook esasekelwa yiMicrosoft.
Uhlelo lwakho lokusebenza lwe-imeyili kungenzeka ukuthi lusebenze kahle ngaphambi kokuba lungaphenduli noma luhambe kancane. Kulokhu, hlola usayizi we OST/ Ifayela le-PST. Uma usayizi weqa umkhawulo onconyiwe, sebenzisa DataNumen Exchange Recovery or DataNumen Outlook Repair ukulungisa nokuhlukanisa OST noma ifayela le-PST, ngokulandelana. Manje gcina ingxenye yedatha yebhokisi lakho leposi bese ugcina okuzenzakalelayo okuncane OST/ PST eliqinisekisa ukusebenza okuhle kwe-Outlook.
Kulabo abane-add-ins eyeqile nama-RSS feeds ku-Outlook, kungakuhle ukuthi ubakhubaze bese u-restart Umbono. Uma izindlela ezingenhla zingayilungisi inkinga, kunethuba elikhulu lokuthi your OST noma ifayela le-PST alinaphutha. Sebenzisa DataNumen Outlook Repair ukuthola kabusha i- ifayela le-PST elonakele. Endabeni yokuba nephutha OST amafayela, sebenzisa i- DataNumen Exchange Recovery ithuluzi. Amafayela okukhipha azoba ngefomethi ye-.pst. Lapho usuthole imininingwane yebhokisi lakho leposi, manje usungayivula usebenzisa i-Outlook. Ukuze uvikele idatha yebhokisi lakho leposi ekungcolisweni isoftware yakho yokuvikela amagciwane, ikhulule ekuskeneni amafayela e-Outlook.